Ihe ngosi nka nke Ulyanovsk
Ulyanovsk, obodo dị na Russia, site n'aka nri nwere ike ịkpọ obodo nke ihe ngosi nka. E nwere ọtụtụ n'ime ha na ọ gaghị ekwe omume ịga na veranda niile na ihe ngosi n'otu ụbọchị. Ka anyi mata nke oma na amaghi ihe banyere ihe ngosi nka na Ulyanovsk.
Museum nke Lenin na Ulyanovsk
Otu n'ime obodo omenala obodo a bụ ihe ncheta nke V.I. Lenin, onye obodo. E meghere ihe ngosi nka n'ime ulo Ulyanov na 1923. Ihe ngosi ya na-etinye aka na ndụ na ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke nnukwu nnupụisi, yana ndị enyi ya na ndị iro ya. Na Museum Lenin ị nwere ike ịhụ akwụkwọ nke ihe odide ya, isiokwu ya, akwụkwọ edemede na arịrịọ ya, yana ihe onwunwe nke Bolshevik a ma ama. Otu ọnọdụ ahụ - arịa ụlọ, akwụkwọ ngebichi, ụlọ osisi na ọbụna ifuru - bụ nke e chebere ma ọ bụ weghachite ya na mbido mbụ ya.
Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ihe ngosi nka nke a raara nye onye ndu nke usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị na Tampere .
Ọkụ Ọkụ nke Simbirsk-Ulyanovsk
Ọzọ pụrụ iche ihe ngosi nka na Ulyanovsk bụ fireman. A na-etinye aka na nsogbu nke nchekwa ọkụ nke ugbu a na n'oge gara aga. Ulyanovsk, nke bụbu Simbirsk, na 1864 nwetara ọkụ dị ọkụ nke bibiri ụlọ niile nke obodo ahụ, gụnyere 12 ụka. Kemgbe ahụ, ndị obodo ahụ ewerewo ihe dị oké njọ iji chebe ọkụ. Ụlọ ihe ngosi nka na-egosipụta ụdị ọkụ ọkụ, ngwá ọrụ ọkụ ọkụ, diorama "Ọkụ nke 1864", foto "Ụlọ tupu na mgbe ọkụ" na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị.
Gaa na ụlọ ngosi ihe nka a ga-ekwe omume na njem nleta na site n'usoro ndokwa.
Ulyanovsk Museum of Photography
N'oge na-adịbeghị anya, n'afọ 2004, a na-emeghe ihe ngosi nka n'Ulyanovsk a na-akpọ "Simbirskaya Photography." Ndị ọbịa nwere ike ịmatakwu akụkọ ihe mere eme nke nkà a na Simbirsk, na ọdịnala nke foto foto. N'ime ihe ngosi kachasị mma ka a ga-emepụta ihe igwefoto ochie na ihe osise nke ụlọ ihe osise nke narị afọ nke XIX. E nwekwara ụlọ maka foto nke oge a, ebe a na-eme ngosi nke foto ndị dị na mpaghara kwa oge.
Otu ụlọ ahụ na-edebe ihe ngosi nka dị n'ime ụlọ osisi, ebe ebe 1904 a na-arụ ọrụ foto.
Ekwesiri ighota na otu ihe a di n'etiti ihe ngosi nka nke Nizhny Novgorod .
Ihe ngosi nke Urban Life na Ulyanovsk
Ihe omuma ihe omuma nke Simbirsk nwere ike iju ya anya nke oma site n'ileta ihe omuma ihe omuma nke ndu obodo. Ọ bụ ụlọ ndị isi n'oge ochie nke narị afọ nke iri na itoolu, ebe ezinụlọ dị n'etiti ndị mmadụ bi. Na ihe ngosi nka ị ga-ahụ ihu na Art Nouveau style, ọrụ Kuznetsk porcelain, piano nke 1900 na ihe ndị ọzọ nke ezinụlọ nke Simbirian.
Ọ bụghị ihe na-adọrọ mmasị bụ nleta na ụlọ ngosi ihe ngosi ndị ọzọ nke obodo Ulyanovsk - nkà, akụkọ ntụrụndụ obodo, meteorology, ethnography, ihe ngosi nka nke omenala ndị mmadụ na nchedo nke nwata.
Anya nke Cuba
Ebe nkiri ebe obibi
Obodo kacha mma na Marmaris
Ebe nkiri na Adler
Sharjah - ebe nkiri
Disneyland na Tokyo
Achọrọ m visa na China?
Taman - ebe nkiri
Hotels na Santorini
A na-ahapụ ụlọ ndị dị nso na Moscow
Dịrị na Altai n'oge oyi
Creme ghee n'ụlọ - uzommeputa
Nzuzo nke Mma Sophia Loren
Sakam abụọ na-atụgharị
21 ụdị nkịta na-eme mgbe ha na-agafe na poodle
Kedu ihe ị ga-eme n'Intanet?
Ịgba ọsọ na ụmụaka
Stewed kabeeji - uzommeputa
Olivia Wilde kwetara na a gọrọ ya na ọ bụ ọrụ n'ihi ... afọ!
Kedu otu esi eku ume n'ụzọ ziri ezi mgbe ị na-agba ọsọ?
Chris Martin na Gwyneth Paltrow: agaghị agba alụkwaghịm?
Umunyi ndi nwanyi 2013
Ihe ndị a na-atụghị anya ya
Akara e ji eme ihe
Chicory maka ụkọ ọnwụ
Ụlọ e ji akwa zoo na ime ụlọ
AFP - gini ka ọ bụ?
Kedu ihe ka mma - biorevitalization ma ọ bụ mesotherapy?
Eme ka ikuku dị ọcha na ionizer na oriọna UV